यो हो संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, २६ लेन, कुन देशमा होला ? – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > यो हो संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, २६ लेन, कुन देशमा होला ?
यो हो संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, २६ लेन, कुन देशमा होला ?
admin October 24, 2019 बिजनेस	0
अहिले नेपालमा सहरी सडक तथा राजमार्गहरू फराकिलो बनाउने अभियान नै चलेको छ । तत्काललाई दु:ख नै भए पनि तिनले भविष्यमा नेपालको सडक यातायातलाई सुगम बनाउने विश्वास मानिसहरूमा छ । नेपालमा सडक फराकिलो बनाउने अभियान चलिरहेकै सन्दर्भमा संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक कुन होला भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो ।
संसारकै सबैभन्दा फराकिलो सडक अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित द क्याटी फ्रि वेलाई मानिन्छ । टेक्सास राज्यको ह्युस्टन सहरको द क्याटी फ्रि वे २६ लेनको सडक हो, जसमध्ये १२ मुख्य लेन छन् भने ८ वटा लेन फिडर लेनका रुपमा र ६ वटा लेन म्यानेज लेनका रूपमा छन् । त्यसबाहेक यो सडकसँगै ४ वटा अलग्गै सर्भिस ट्रयाकसमेत निर्माण गरिएका छन् ।
यो सडकका प्रत्येक लेन ३ दशमलव ७ मिटर चौडा छन् । ती लेनको दायाँबायाँ निर्माण गरिएका फुटपाथको चौडाइसमेत ३ मिटर छ । हरेक लेनको बीचमा १ दशमलव २ मिटर ठाउँ खाली छोडिएको छ । यो सडकमा हरेक दिन २ लाख १९ हजार सवारी साधन गुड्छन् । अमेरिकाको सडक विभागका अनुसार यो सडकले आगामी ५० वर्षसम्म सेवा दिन सक्छ ।
रिठ्ठे भिरमा ऐना भित्र लुकेको ड रलाग्दो रहस्य: रहश्यमय भीरले कसरि निल्यो यति धेरै यात्रु ?-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
यी झापाकि मनकारी बालिका जसले खाजा नखाएर जम्मा गरेको पैसाले गरिन अनाथ आश्रममा सहयोग (भिडियो सहित)
अर्काे सुनकाण्ड, फेरि धादिङमा समातियो ४ किलो सुन, कहाँ बाट अाउँछ किलोका किलो सुन?
आन्तरिक हवाइ कम्पनीहरूले दिए नेपाली यात्रुहरूलाई यस्तो खुशीकाे खबर
उडाउन तरखरमा रहेको विमानमा तेल नभएको चाल पाएपछि
०७६ कार्तिक ३० गते शनिबार ई. स. २०१९ नोभेम्बर १५ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
भारतले २३ वर्षअघि नै भनेको थियो प्रमाणका आधारमा भूभाग हस्तान्तरण गरिन्छ !
विप्लवका जाजरकोटका इन्चार्ज कोहलपुरबाट पक्राउ
पापी पतिले नव विवाहिता श्रीमति नै बेहोस हुने गरि सुहागरातमै गरे यस्तो कुकर्म!
ओली नेतृत्वमा विश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलुक बन्दैछ!
नेपालको सीमा कटेपछि विदेश जाने महिलाको सर्वस्व लुटिन्छ
के छ त्यस्तो रहस्य! युवतीहरुले खोज्न थाले लजालु पुरुषको शुक्रकिट
दाई र बहिनी माथि अवाञ्छित आक्रमण: सम्बन्ध सुन्नासाथ भोलिका दिनमा नाक खुम्च्याउन नपरोस्
admin July 21, 2019 July 21, 2019
पूर्वयुराज्ञी हिमानी शाहले फेसबुक पेजमा यस्तो मर्मस्पर्शी स्टाटस किन लेखिन्? हेर्नुस्
प्रेस काउन्सील दर्ता नम्बरः
श्रीमान विदेश गएको मौ'का छो'पी सौ'तालाई टु'क्राटु'क्रा पारेर बो'रामा राखि फाल्ने प'क्राउ !
दाजु भाईको एउटै चि'तामा अन्त्ये'ष्टी, शो'कले गाउँमा बलेन चुलो
श्रीमानले घर न घा'टको बनाए ! ५ महिनाको बच्चा लीएर गोठमा बस्नुपर्ने | बाँकेमा बच्चाकी आमाको बि'चल्ली(भिडियो सहित)
भारतले नेपालमाथि दादागिरी देखाएकै बेला, अचानक चाइनाले गर्यो नेपाल नै घात हुने यस्तो निर्णय!